U-Miss Universe 2015, Pia Alonso Wurzbach, owaziwa kwiingcambu zobungcali njengomzekelo we-Pia Romero, uthatha indawo yeshumi kuloluhlu. Pia u-actress, umzekelo kunye nendlovukazikazi omhle owawunqoba isithsaba se-Miss Universe ngonyaka we-2015 emva kokuba waba ngu-Miss Universe 2015 ePhilippines.
Uhlobo kunye nenkohlakalo, udade osemtsha kunye nombulali, inkwenkwezi ye-movie kunye nentombi yommelwane.
Kwakhona, kwinqanaba lethu, ummeli waseNdiya.
UDepika uhlala ekhangeleka kakuhle. Ubume bakhe, ukuphakama, ukumomotheka kunye namehlo akhe ayimpawu ezahlukileyo ezenza ukuba ahluke kuzo zonke izibopho zasebukhosini ze-Bollywood ne-Hollywood.
ULisa wabuthana UMongameli Liza 2
Indawo yokuqala kwindawo yokulinganisa "amantombazana enhle kakhulu kwihlabathi kwi-2016 ngonyaka" ngakwesokudla-inkwenkwezi yangaphambili ye-Disney amafilimu Selena Gomez. Selena yaba ibhinqa eliselula enhle kakhulu. Ngaphambili, ukuba amnandi umsulwa, ngoku umxube ogqibeleleyo ubuhle ezibalaseleyo kunye nezesondo. Selena - lwalo ukuzithemba kunye ubumnandi yendalo, nto leyo wamvumela ukuba ukukhokela rating yethu.
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-8,798, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)